> Resource > Free > Top 5 Best Free 3GP Video Rotators
3GP waa qaab guud ahaan loo isticmaalaa in uu kaydiyo videos ee 3G telefoonada gacanta. Mararka qaar, marka aad videos la telefoonka smart, ay u ekaan karaan ilaa dhinaca hoos sababtoo ah telefoonka smart ayaa Wajigooda videos si toos ah. Xaaladdan oo kale, oo aad jeclaan lahaa inuu isku shaandheyn 3GP videos 90 darajo la daawado ka wanaagsan. Halkan waxaa ku qoran liiska ugu sareeya 5 free video 3GP rotators.
Free Video Flip iyo beddesha
Movie Rotator 2.0 waa version casriyayn ee Movie Rotator. Waxaa si buuxda la jaan qaada Windows 7 iyo 8 iyo gelineya inaad isku shaandheyn videos in kaliya hal qasabno yar. Waxa intaa dheer in 3GP, software ayaa sidoo kale taageertaa qaabab kale sida AVI, Mpg, FLV, MP4, wmv, MOV iyo si ka badan.
Kaliya diyaar u Windows 7 iyo 8.
Video Rotator waa codsi ah u flipping video clips u socoto 90 degree, muraayad siman, anticlockwise, ama ka yeellay-hoos. Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa in ka badan 15 qaabab video aqbasho caan ah oo ka mid ah 3GP, Mpg, AVI, FLV, wmv, MOV iyo MP4, iwm Video Rotator saamaxaya kuwa isticmaala inay sidoo kale badbaadiyo nasiisay videos galay 5 caanka ah qaabab video, Mpg, FLV, MP4, AVI , iyo MOV. Barnaamijkan wuxuu taageeraa hab Dufcaddii oo awood u isticmaala ay awoodaan in ay ku dhajisan & isku shaandheyn videos in badan.
Toos ah iyo si sahlan loo isticmaalo;
Isku shaandheyn karaa Videos in badan.
Burburtay mararka qaarkood;
Iyadoo Free Video Flip, waxaad ku dhajisan karo ama isku shaandheyn video la mouse click ah. Waxaa qoreysa kala duwan presets sanyihiin oo aad isku shaandheyn karaa video ah oo ay 90 darajo, 180 darajo ee u socoto iyo anti-bilow dhanka jihada. Ama ku dhajisan video ah vertical iyo sidoo kale gudban in la sameeyo saxo dheeraad ah si loo video asalka ama nasiisay video.
Waxay bixisaa si loo soo dajiyo badan oo codsiyada la rabin.
Freemake Video Converter waa ka badan Converter video ah. Waxa kale oo ay bixisaa hab aad u sahlan in aad bedesho wareeg ah ee filimada aad. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan sida MOV, AVI, MP4, wmv, MKV, 3GP iyo in ka badan. Marka aad socota waa ay fududahay in la isticmaalo, toos iyo dhibka badnayn.
User-friendly interface oo si sahlan loo isticmaalo.
Kasta video Converter qoreysa interface ah mid aad u fudud in la isticmaalo. Waxaa xitaa kuu saamaxayaa inaad isku shaandheyn ku yaalla iyo qaar ka mid ah sameeyo tafatir sida smart falinjeeerka, lana siii, lafdheerta iyo sidoo. Waa qayb ka mid ah dhan-gabay la, dhan-cayaar qoqobada software sida ay sidoo kale taageertaa tiro aad u badan oo ah qaabab file, oo ay ku jiraan 3GP dabcan.
Taageerada ku dhawaad ​​kasta oo ah qaabab video,
Wondershare Video Editor waa barnaamij weyn u warejin 3GP. Iyada oo kaliya qasabno qaar ka mid ah, waxaad isku shaandheyn karaa videos in ay booska daawashada caadiga ah. Waxaad awoodaa inaad isku shaandheyn aad videos 90 darajo oo bilow dhanka dheeraad ah ama anticlockwise, laakiin sidoo kale vertical iyo horizontal iyaga ayna miiqdaan ma aha oo kaliya. Waxay leedahay xawaare warejin si degdeg ah oo qaban doona isbedelada aan xumaynaya tayada asalka ah. Waxa intaa dheer in 3GP, software ayaa sidoo kale taageertaa qaabab kale sida MOV, ASF, FLV, VOB, WMA, MP4, wmv, AVI, MKV, Mpg oo badan.